somalization – SOOMAALPEDİA
Posted on May 6, 2016 May 7, 2016 by SOOMAALPEDİA
Luqad ahaan: waa eray ka yimid magaca soomaali, oo noqonaya soomaaliyeyn.
Macno ahaan: waa diirad saarida soomaalinimada, bandhigista saameynta wanaagsan ee soomaalida iyo la dirirka xumaanta ku aadan soomaaliya.
Somalization, waxay timid ka dib soo ifbixiisa erey ahaan ee loo isticmaalayay in lagu tusiyo caalamka in soomaaliya looga daysado burbur,wareer, fashil, nidaam la’aan iyo is fahan waa. Waxa ayna macno ahaan tilmaamaysaa; in la soomaaliyoobo ay tahay in fowdo iyo ciriiri nololeed la galo, sidaa awgeed waxaan bilownay ololahan, anagoo ka dhiidhinayna arinkaas iyo in la inaga takooro wadamada aduunka ee burbur iyo dagaalo sokeeye soo maray.
Waxaan doorbidnay, anaga oo diirada saarayna guud ahaan soomaaliya iyo wax kasta oo la xiriira, in aan raadceyno wax walba oo horumar, ilbaxnimo, midnimo, sooyaal lagu faano, dhaqan wanaag, geesinimo iyo dhinacyo badan oo ay caan ku tahay.
Waa hawl qof walba oo soomaali ah looga fadhiyo, waa difaaca magaca aan wadaagno. Waa dhawrista soo jireenkii soomaaliyeed.
İsticmaalka dunida ee qaabka khaldan ah, waa takoor cad iyo liidis tan ugu xun ee soo marta soomaali meel walba oo ay joogto; ileen sumadii lagu yaqaanay iyo waxay aduunka kaga soocnaayeen, oo ah magacaas ayaa weerar lagu yahay, in laga hortagana waxay ku jirtaa gacanta soomaalida meel ay joogaanba.
Somalization, waxay ka dhawrsantahay inay faraha la gasho arimo siyaasadeed, mid qabiileed, mid kooxeed, ama wax la mid ah. Waxaana la aasaasay sanadka 2016/5/1.
1.İn la raadceeyo samooyinka soomaaliyeed.
2.İn la soo bandhigo saameynta soomaaliya, mid hore iyo mid hada taagan.
3.İn la eego horumarada ku aadan soomaaliya iyo soomaalida.
4.İn la wacyi geliyo soomaalida.
5.İn la daraaseeyo taariikhda san ee soomaaliya.
6.İn lala diriro qabyaalada, magac xumada iyo wax walba oo cadow ku ah soomaalinimada iyo soomaaliya.
7.İn la dhiiri geliyo horumar walba oo ku aadan dalka iyo dadka.
“Waxaan ahay soomaali, waxaanna ku faanaa Soomaalinimo”
Waxaan aaminsannahay, dagaalada sokeeye iyo wax walba oo la mid ah, in aysan marnaba ku bedelmi doonin magaca, maamuuska, sumcada, sumada, sooyaalka, dhulka, dhaqanka, dadka, fekerka iyo muuqa soomaaliyeed.
“Gacmo wadajir ayay wax ku gooyaan” ee soomaalaay diintiina, midnimadiina, dowladnimadiina, nidaamkiina, sharaftiina, iyo iska warqabkiina dhawrsada.
Tan iyo burburkii waxaa batay in soomaalida ay doorbideen qabiilka, ayna luntay soomaalinimadii soo jirtay; sidaa awgeed waxaa haboon in dib loo “soomaaliyoobo” oo qarannimada la doorbido badalka qabiilka, qof walbana uu ku faano inuu yahay soomaali iyo in la xoojiyo ogaanshaha halista ku jirta in laga tago soomaalinimada, loona hanqal taago cadowga soomaalinimo.